トップページ ＞ 言語 ＞ ソマリ語 ＞ General-nolosha furan tii pachinko ah, feature-arki jidka
※ soo dhaafay Fadlan tixraac sida dhaqankan cusub ee warshadaha oo dhan
pachinko wuxuu ka kooban yahay in hal kulan oo ka mid ah macaamiisha iyo dukaamo in ku guuleysato ama lumiso. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad had iyo jeer laga badiyo, sababtoo ah ma macaamiisha u iman doonaan inay dukaanka ugu dhakhsaha badan, kooxda martida pachinko, soo noqnoqda ama soo kabsaday oo soo baxay, sii wadi doonaa in aan sii daayo macaamiisha. In dunida ka mid ah xeeladaha sida, haddii Minukeru xilliga furitaanka, waxaad noqon arrin weyn oo saameyn ku jaaniska ah ku guuleystay. xilliga furitaanka
, waxa ay noqon doontaa kala duwan ee dukaanka kasta. Waxaan aad doonayso inaad ogaato ugu horreeya oo dhan, oo u sheegay in wajiga furitaanka qowladda pachinko ah, ma go'an in ay arrinta, si loo fududeeyo agagaarka bilowga musmaarro beddelo, si ay kubad ma hoos, xaqiiqda ah in sidoo kale laga beddelo agagaarka musmaarrada Waxa ay noqon doontaa. Or, kicin ama hoos u dejinta ee Horukon, ma u muuqan kuma soo baxo, maxaa yeelay, ROM la go'aamiyo, anigu ma garanayo inay kooxda maamulka ee. Si kastaba ha ahaatee
, haddii si ay ula qabsadaan ciddiyaha uu ku noqon karo wax badan oo ka mid ah rogista cajaladda, by, tusaale ahaan, waxaa ka mid ah set oo ah Horukon, iyadoo la kordhinayo tirada bakhtiyaa u leh wakhtiyada iyo in ROM ah, waxa ay noqon doontaa fudud si ay u ku dhacay. Waa, waxaan wax in arrinta loo arkay dhankeeda qowladda pachinko ee gobolka sida. Nuqdada, xusuuso. wax
yeedhay arrin waqtiga waa, soo baxay qeybtii hore ee bisha, haddii ay jiraan sidoo kale waa martida pachinko ee qeybtii labaad ee dib u soo kabashada ah, waxaa jira dabcan qeybsanaan. Sidaas daraaddeed, garan sifooyinka qowladda pachinko xilli furan, isku day inaad aragti nolosha furan dukaanka ciyaaro qof walba ka. First of dhan, markii la sheegay in xilli furan, soo bandhigi doonaa badhtamaha qallafsan bilood badan oo a, ma aha oo kaliya waqti cayiman, in xaaladaha kala duwan ee bisha, dhab ahaantii, waxaa jira.
Ujeedada gaarka ah ee, ka dhacdo bixinta heshay a, 's wakhtigii ay maalmaha soo socda ayaa ah kuwa ugu furan. Haddii ay dhacdo waa dud a, kartaa inaad badan inuu ka tago dhowr maalmood sixitaanka dhidibkii.
Intaa waxaa dheer, xataa in ay dhacdo ka mid ah heshay iyo hawlgal, iibka iyo faa'iido guud sida dhacdooyin la qorsheeyay, si ay u soo jiitaan macaamiisha dhamaadkii kabashada bishii, sababtoo ah waxaa jira daydo lambarka kiiska ee waa sida ay tahay goob iyo ciddiyaha qabsiga wanaagsan , Hall ka dib markii ay dhacdo weyn Waa in aad sii daawashada. dhacdooyinka
, oo lagu daydo oo caan ah sida maanta ka dib markii, lagu daydo waxaa lagu talinayaa, waxaan u maleynayaa in sidoo kale waa fikrad wanaagsan in aad ka doodid, sababtoo ah waxaa macquul ah sare. Hawlgalka ayaa waxaa loogu tala galay in lagu si weyn u saameeyay cimilada. Maalintii xigtay, marka ay jirto saadaal ah cimilada lumo waa, waxaa suuro gal ah in wax soo saarka waxa lagu soo dhacaya.
Mararka sida, ama la furan yar dhidib ah, xataa haddii meel sare waa in ciidanka, oo ku saabsan samaynta dhexe ayaa sidoo kale waxaa laga yaabaa in ay u soo galeen cutub dhowr. maalin xun Weather waxa, si toos ah dib ugu aan, aad xooggaaga iyo tagaan wax yar Leexashadani ah, miiska u fiican la helay. Markaas, aad rabto in aad ujeedadoodu tahay dhamaadka waa maalin bedelka of Xintai ah.
Xintai maalinteedii kowaad, iyadoo la rajaynayo dambe soo jiitaan macaamiisha maalinta ku xigta, waxaa jira dukaanka in ay soo saaraan heshay a. Haddii xilli furan yahay, waxaa lagu xaqiijin karaa xawaare wareeg ah at kun oo yen. Xawaaraha wareeg ah yen ka kun, oo waa ka baxsan line soohdinta, waa in uu furay bilowgii dhidibkii. In the case of tii pachinko kuwaas oo hagaajiyay ee Horukon, waxaa la sheegay in ay la qabsato ama jaaniska hit weyn. Maalintii taas oo la sheegay in nolosha furan, waxay ku saabsan tahay saddex qallafsan.
gaar baaro sida waxaa kaliya ma ahan si loo hubiyo Robo xogta iyada oo tii ugu badan pachinko kartaan. Or, kaliya in dukaanka in ay iskaashi la adeegyada, sida site Robo xogta Todoba kale oo suuragal ah in ay ku badallano adeegga noocan oo kale ah. , Waxaad doonaysaa in aad ujeedadoodu tahay dhamaadka waa maalin bedelka of Xintai ah.
gaar baaro sida waxaa kaliya ma ahan si loo hubiyo Robo xogta iyada oo tii ugu badan pachinko kartaan. Or, kaliya in dukaanka in ay iskaashi la adeegyada, sida site Robo xogta Todoba kale oo suuragal ah in ay ku badallano adeegga noocan oo kale ah.